तानसेन, असोज ५– साहित्यकार लक्षिमा ज्ञवाली घिमिरेद्वारा लिखित छचल्किएका तरङ्गहरू कविता संग्रहको शुक्रबार तानसेनमा बिमोचन गरिएको छ ।
वरिष्ठ साहित्यकार चोलेश्वर शर्माले कृतिको बिमोचन गर्दै सौन्दर्य पारखी ज्ञवाली कृतिमा आफै पोखिनुभएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रले भोगेका कथाहरुका मन कवितामा रहेको र जीवन बुझ्नका लागि यो कृति महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो । हास्यव्यङ्ग विधाका साहित्यकार शर्माले शान्त समयमा मनमा रहेका भावनाबाटै कविता जन्मन्छ भन्नुभयो ।। धवल पुस्तकालय पाल्पाको पुस्तक पढ्ने दलानमा आयोजित बिमोचन समारोहमा सहभागि विभिन्न स्रष्टाहरुले कथ्य भाषामा कविता लेखेर जनजिब्रोको बोली ल्याउन कवि सफल रहेको बताएका थिए ।
बिमोचन कार्यक्रममा धवल पुस्तकालय पाल्पाका अध्यक्ष युवराज पौड्याल, कला विमर्स केन्द्र पाल्पाका अध्यक्ष डा. नेत्र प्रसाद न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो मदनपोखराका स्टेशन प्रबन्धक राजेशकुमार अर्याल, बुद्धिजीवी निर्मल श्रेष्ठ, साहित्यकारहरु कृष्ण पहारी, लक्ष्मी उपाध्याय, कमल खत्री, भावना खनाल लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । विश्व नारी नेपाली साहित्य समिति पाल्पाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक टंक भट्टराई, साहित्यकार मन गहिरेले कृतिको समिक्षा गर्नुभयो । विश्व नारी नेपाली साहित्य समिती पाल्पाकी उपाध्यक्ष बिजया पन्तको अध्यक्षता र कृष्णाकला भण्डारीको संचालनमा कार्यक्रम चलेको थियो ।
२०३० सालमा खस्यौलीको मालमुलमा जन्मनुभएकी कृतिकार ज्ञवालीले अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । छचल्किएका तरङ्गहरू कविता संग्रहमा १५ वटा पद्य र ४७ वटा गद्य गरी ६२ वटा कविताहरु रहेका छन् ।
रेग्मीको लघुकथा सार्वजनिक
तानसेन, साउन १९ – पाल्पाली साहित्यकार पुष्कर अथक रेग्मीद्वारा लिखित ‘अठार’ लघुकथा सङग्रहको शनिबार तानसेनमा बीच विमोचन गरिएको छ ।
कृतिको बिमोचन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कथाकार बनमाली निराकारले सिर्जना व्यक्तिगत कला भएपनि कला प्रकाशित गरेपछि सबैको साझा सम्पत्ति हुने बताउनुभयो । उहाँल भविष्यमा अझ सन्देशमुलक कृतिहरु लेखन तथा प्रकाशनका लागि रेग्मीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । स्वास्थ्य तथा साहित्य प्रतिष्ठान पाल्पाद्वारा प्रकाशित कृतिको समालोचना गर्दै डा. नेत्रप्रसाद न्यौपानेले उत्तरवर्ती धारलाई समेटेर जीवन र जगतको दृष्टिकोण कथामा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो । साहित्यले नेपाली वास्तविक परिस्थितिहरुलाई रोचक ढङगबाट व्यक्त गर्ने नयाँ कथाकार पाएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा त्रिमूर्ति निकेतनकी उपाध्यक्ष मन गहिरे, लेखक एवं बुद्धिजीवी निर्मल श्रेष्ठ र बुद्धिप्रसाद शर्मा, दयाराज भण्डारीलगायतले संग्रहमा शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, यौन, मानवीय संवेदनाका विषयवस्तुहरुलाई कथनीय बनाइएको बताउनुभयो । २५ पृष्ठको कथासंग्रहमा चिटचोर, चिया पसल, छ पोका दुध जस्ता २४ वटा लघुकथाहरु संग्रहित रहेका छन् । प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष लक्षिमा ज्ञवालीको अध्यक्षता र चन्द्रकान्त न्यौपानेको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।